इस्राएलका चाड़-पर्वहरू र तिनीहरूका आत्मिक अर्थ
प्रत्येक वर्ष, प्रायश्चितको दिनमा प्रधान पूजाहारीले आफू लगाएत सबै इस्राएलीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्न मन्दिरको महा पवित्र-स्थानमा जान्थे। त्यस दिनमा तिनीहरूका सबै पापहरू धोइन्थ्यो। “किनभने त्यसै दिन तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ। तब परमप्रभुको सामुन्ने सबै पापबाट तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ” (लेवी १६:३०)।
हामीले छाप्रो-वासको चाड़लाई निस्तार चाड़सँग तुलना गर्नुपर्छ। निस्तार चाड़मा यहूदीहरूले मिश्रमा बसेको समयको स्मरण गर्थे। तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका दासी अवस्थाबाट परमेश्वरले मोशाद्वारा छुटकारा गरी स्वतन्त्र गराउनुभयो। तिनीहरूले आफ्नो दासी अवस्था र स्वतन्त्र अवस्थामा के फरक छ भनी तुलना गर्थे। छाप्रो-वासको चाड़मा तिनीहरूले मरुभूमिमा बसेको समयको सम्झना गर्थे। प्रतिज्ञा गरिएको मुलुकमा इस्राएलीहरूसँग बस्ने घर, आफ्नै जमिन र नियमित खाना उपलब्ध थियो तर मरुभूमिमा हुँदा ती कुराहरू एकदमै फरक थिए। तिनीहरू त्यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सरिरहन्थे र स्वर्गबाट मन्न पठाउनुहुने परमेश्वरमा भर पर्थे। अब कुनचाहिँ कुरा असल हो ? के स्वर्गबाट पठाइएको मन्न खाएर मरुभूमिमा बस्नु असल हो ? अथवा, परमेश्वरले जुटाउनुभएको इस्राएलको मलिलो भूमिमा बस्नु असल हो ? हामी उत्तर दिन सक्छौँ- “प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा बस्नु नै असल हो।”
छाप्रो-वास भन्ने शब्दले पालमा जीविका चलाउने अस्थाइ बसोवासलाई बुझाउँछ। धर्मशास्त्रमा यसले मानव शरीरको चित्रण गर्छ र यस संसारमा मानिसको जीवन छोटो छ भन्ने कुरालाई पनि प्रतिविम्वित गर्छ। हाम्रो शरीर छाप्रो-वासजस्तै हो भनी पावल बताउँछन्। यूहन्ना १:१४ ले यसो भन्दछ, “अनि वचन देहधारी हुनुभयो, र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो”। 'उहाँ हामीमा छाप्रो-वास जस्तै गरी बस्नुभयो' भन्ने यो पदको पछिल्लो खण्डको वास्तविक शाब्दिक अर्थ हुन्छ। ‘येशू मानिसको शरीरमा अस्थाइ रूपमा बस्नको लागि मात्र आउनुभएको थियो’ भन्ने यो पदको अर्थ हुन्छ। उहाँ छाप्रो-वासको चाड़को समयमा नै जन्मनुभएको थियो भन्ने बारेमा बलियो प्रमाणहरू पाइन्छन्। यी सबै कुराहरूले के देखाउँछन् भने, छाप्रो-वासको चाड़को महिमाहरू मानिसको यही जीवनमा पूरा हुनुपर्दछ। परमेश्वरका सन्तानहरू मानवीय शरीरमा नै हुँदा, उहाँ तिनीहरूको जीवनमा वास गर्नुहुन्छ। यो चाड़ले भविष्यमा हुने स्वर्गीय महिमाहरूको विषयमा बताउँदैन तर यही पृथ्वीमा हुने महिमाको बारेमा बताउँछ। भविष्यमा हामीले हाम्रो मरणशील शरीरहरूलाई छोड़ेपछिको अवस्था पक्कै पनि अहिले हामीले कल्पना गर्नेभन्दा धेरै नै असल हुनेछ तर अहिले मानवीय शरीरको अवस्थामा नै अनुभव गर्न सकिने महिमाहरूका विषयमा छाप्रो-वासको चाड़ले बताउँछ।